Kenya oo xirtay masuuliyiin ka tirsan guddiga Olimbikada - BBC Somali
Kenya oo xirtay masuuliyiin ka tirsan guddiga Olimbikada
27 Agoosto 2016
Image caption Ciyaarihii Rio
Seddax ka tirsan masuuliyiinta Guddiga Olimbikada ee Kenya ayaa lagu xiray magaalada Nairobi kaddib markii fadeexooyin is xigxiga ay saameyn ku yeesheen ciyaartoydii Kenya u matalaysay ciyaarihii Rio.
Booliiska ayaa sheegay in Xoghayaha Guud ee guddiga, Francis Paul, iyo laba qof oo kale lagu wado in maxkamadda la geeyo Isniinta.
Kenya ayaa billowday baaritaan ku saabsan sida ay u dhaceen dhibaatooyin saameeyey ciyaartoyda Kenya sida qalabkii ay ku ciyaari lahaayeen oo la waayey iyo fadeexooyin la xiriira adeegsiga dawooyinka kordhiya awoodda jirka.
Wasiirka ciyaaraha Kenya ayaa kala diray Guddiga Olimbikada Khamiistii, balse masuuliyiinta guddiga ayaa ku gacan seyray amarka wasiirka.
Kenya ayaa biladihii ugu badnaa ka soo hoyisay tartankii Olimbikada ee Rio marka laga hadlaya qaaradda Afrika.